Ọ bụrụ na ị nwere Google Pixel, ị ga -enweta ọnọdụ Lapse Oge ọhụrụ | Androidsis
[APK] Ihe Pixels niile na-anata oge Lapse mode na igwefoto Google
N'ihi a igwefoto Google ọhụrụ na -emelite Pixel niile Ha na -enweta ọnọdụ Oge Lapse nke a hụrụ na Google Pixel 3a ọhụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere nke ọ bụla nke Pixel 1, 2 ma ọ bụ 3, ị nwere ike lekọta ọnọdụ ndị ahụ na ọnọdụ Oge Lapse ọhụrụ ahụ.
Ma nke a abụghị ihe niile, mana a chọpụtala na n'abalị Sight, the Ọnọdụ abalị igwefoto Google, ị seela foto na RAW na -enweghị mfu ogo onyonyo mgbe ị na -ewere data niile. Igwefoto Google nke na -eweta ihe ọhụrụ ahụ na mpaghara ndị ọzọ.
Ọ bụ ụdị 6.2.030 nke na -agbakwụnye ọnọdụ ọhụrụ a nke anyị nwere ike ịchọta site na nhọrọ “More” na taabụ ụdịdị dị na ala. Oge Lapse na -enye gị ohere ịme n'etiti ọsọ dị iche iche nke ahụ sitere na 1x ruo 120x ruo "mpikota onu" nkeji iri abụọ na -ebudatara na vidiyo nke abụọ 10.
Wayzọ ọzọ dị mma iji bulite ọdịnaya dị mma na netwọkụ mmekọrịta ma si otú a mata onwe gị n'ihu ndị enyi ma ọ bụ naanị na ọrụ anyị ma ọ bụrụ na ọ metụtara ihe dijitalụ. Ụfọdụ njirimara dị n'ụdị a gụnyere ike igbanwe nha ọcha. N'ikpeazụ, anyị ga -enweta vidiyo Mp4 nwere ihe ngosi oge adịghị ogologo dị n'elu dị ka ndị uwe ojii Android kwadoro.
Ihe ọhụrụ ọzọ nke ụdị igwefoto Google ọhụrụ bụ nkwado maka ọnọdụ RAW na Night Sight. Ugbu a, anyị ga -ahụ na elu aka nri nke kpalitere iji gaa na ọnọdụ RAW, yabụ a ga -enweta foto ahụ na data niile na -agabeghị ụdị mkpakọ onyonyo ọ bụla.
una Igwefoto Google nke a na -emelite ka oke niile nwere ike ịnụ ụtọ nke ahụ Pixel 3a mode Lapse Oge na nkwado maka ọnọdụ RAW ka anyị nwee ike megharịa foto ndị ahụ n'ụzọ ka mma.
Budata igwefoto Google: APK
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Ihe Pixels niile na-anata oge Lapse mode na igwefoto Google
Hazie ọba akwụkwọ egwu gị n'ụzọ kachasị mma yana egwu Libre na-enye nkwado CUE
Zọ kachasị mma iji mee ka YouTube rụọ ọrụ na ihuenyo na-enweghị ịbụ onye ọrụ adịchaghị